BOGGA FANKA IYO SUUGAANTA
Salaan Maxmed Xirsi "Salaan Carrabey" (HJ)
Gabaygan wuxuu salaan u tiriyey nin uu adeer u ahaa oo uu abaallo badan u galay oo uu markii danbe ee uu Salaan Caydhoobey ugu tegey East Africa. Ninkaasi wax tar daaye Salaan buu suuqa u galay oo afxumeeyey.
Abaalladii Salaan ninkaa u galay waxaa ka mid ahaa
1. In ninkaasi uu si aan ula kac ahayn nin gacantiisa ugu dhintay oo ka dibna Dhulbahante isaga iyo xoolihiisiiba xidheen. Salaan waa kii geeraar ka tiriyey uu Habar Jeclo ku guubaabinayo si ninkaas loo soo furto waana ku guulaystey inuu ninkaa dil kala baxsado.
2. Ninkaas in qolo ka dhacday haweentiisii oo uu Salaan u soo dhiciyey.
3. Ninkaas in mar lagu xidhay Burco inuu Salaan u guntaday oo ka sii daayey.
Ninkii Salaan abaalladaas u galay ayaa odayayo dhawr ah shiriyey oo yidhi ninkani dadkuu isku diraaye aan Gaalka u sheegno si loo masaafuriyo.
Tan kale markii odayadii tusaaleeyiin in ninka uu sidaa lee yahay abaallo u galay ayuu u celiyey abaalna iima geline raganimadaydaan wax kasta kula soo baxay. Salaan oo aan arrinkaas jeclasayn ayaa tixdan caanka ah marshey.